Gbasara Anyị -Wuxi Tecfree International Co., Ltd.
Anyị na-agbakwunye ngwa anyị na ụgbọ ala ọgwụ na friji, anyị na-arụ ọrụ na teknụzụ ọhụrụ iji bulie arụmọrụ na uru. Ndị otu R&D nwere obi ụtọ na ha na-eje ozi.
Factorylọ ọrụ anyị dị nso na ọdọ ọdọ Tai, ndị ọrụ aka ọrụ ruru 55, anyị nwere akụrụngwa dị ka igwe na-enwu ọkụ, igwe nzụlite, igwe na-egbutu laser, igwe na-akụ akpaka wdg.
mmepụta sitere na usoro ISO9001. Tgbasa ụgbụ maka ikuku ma ọ bụ oké osimiri dị mfe na ngwa ngwa.
N'ime afọ ole na ole gara aga kemgbe e guzobere ụlọ ọrụ ahụ, anyị na-agbasochi ụkpụrụ nke "ndị ahịa mbụ, ọrụ obi eziokwu iji mee ka ndị ahịa nwee mmasị, site n'ụkpụrụ nke" n'eziokwu na ntụkwasị obi, ndị ahịa mbụ ", na usoro nke ngwaahịa, anyị ewerela "njiri mara mma, ịdị mma" dịka ụkpụrụ omume anyị, na-agba mbọ inye ndị ahịa ọrụ oke-elu, n'otu oge ahụ, anyị emeela ka ụlọ ọrụ ahụ nwee mmụba ogologo oge.
Anyị ga-eme karịa ma rụọ ọrụ nke ọma n'ubi anyị, anyị na-ele anya inweta ajụjụ gị na ajụjụ gị n'ọdịnihu.